Nyaya dzaunogona kuona paHBO gore risati rapera | Bezzia
Maria vazquez | 19/08/2021 12:00 | Nhau
Kupera kwaNyamavhuvhu kucharatidza kune vazhinji kupera kwemazororo. Vamwe, kunyangwe isu tave tichinakidzwa nemazororo kwenguva yakareba, hatizodzokere kune iyo yakazara tsika yakajairika yematsutso kusvika panguva iyoyo. Muitiro watichadzokera mauri nakidzwa nhevedzano kuti iyo mapuratifomu ekushambadzira sezvo HBO inofanira kutipa.
Gore risati rapera tichakwanisa kuona paHBO: Zvakavanzika zvewanano uye Zvese Zvimwe. Akateedzana maviri ayo achagovana kuonekera pamwe nekutanga kwemwaka mutsva weSuccesions, pakati pevamwe. Tsvaga kuti chii chiri kumashure kwezita idzva remazita uye mwaka nesu.
1 Zvakavanzika zvekuroora
2 Kubudirira (Mwaka 3)
3 Zvimwe zvese
Musi waGunyana 12, Zvakavanzika zveMuchato zvichatanga kuratidzwa muUS, nhevedzano yatichakwanisa kuona zuva gare gare kuSpain. Iwo akateedzana nyeredzi Oscar Isaac naJessica Chastain Yakave yakatungamirwa naHagai Levi, anoona nezvezvimwe zvinonyanyo kuzivikanwa zvekunyepedzera zvemakore apfuura, senge Iyo Affair kana Kurapa, chimwe chezvinhu zvinogamuchirwa zveHBO.
Iwo akateedzana ndeye remake, iyo revision yemazuva ano ye Ingmar Bergmanen chaiwo iyo muna 1973 yakawira paterevhizheni yeSweden. Zvakavanzika zvemuchato zvakabva zvavhundutsa miniseri umo chokwadi chevaviri vakatarisana nemadhimoni avo chakatariswa.
Zvino, angangoita makumi mana emakore gare gare, HBO inogadzirira iyo kuratidzwa nekukanda chiono chitsva parudo, ruvengo, chishuwo, murume mumwe, kuroora uye kurambana kuburikidza nemeso e vaviri vemuAmerican vaviri.
Kubudirira (Mwaka 3)
Mhuri yaRoy ichadzokera kunzira dzavo dzekare mumwaka mutsva uyo uchatanga kuratidzwa paHBO kudonha uku. Mwaka wechitatu uchagadzirisa iyo finale yekuvhundutsa kumwaka wekupedzisira, uko migero yehondo inopikira kuva inorwadza pachipfuva cheWaystar Royco inosimbiswa.
Kubudirira kwakatanga musi waJune 3, 2018 paHBO kuverenga iyo matambudziko e «mhuri yaRoy - Logan Roy nevanakomana vake vana - vanodzora imwe yenhau huru nevarairidzi venyika. Iwo akateedzana anoteedzera hupenyu hwavo sezvavanofunga izvo zvichave ramangwana kana baba vemhuri vasiya kambani. Yakagadzirwa naJesse Armstrong, naWill Ferrell naAdam McKay vachishanda sevarimi vakuru, yakazviita mwaka wechitatu muhutano hwakanaka.
Abril Zamora anonyora, anotungamira uye nyeredzi muTodo lo otro, nyowani iyo HBO ichatanga kuratidzwa pamberi pekupera kwegore uye mairi inoudzwa, isina mafirita uye pasina kuyedzwa, iyo nyaya yeboka remakumi matatu-mamwe mazuva yakavharirwa muhupenyu hwakange husiri iwo wavakarota nezvavari kuyedza kuenda kumberi nekuwana nzvimbo yavo muMadrid.
Zvitsauko zvisere zvinopedzisa kugadzirwa kweCampanilla Films SL achitarisa iye Abril Zamora, Juan Blanco, Nuria Herrero, Andrea Guasch, Marta Belenguer, Raúl Mérida, Miguel Bernardeau naAlberto Casado, pakati pevamwe. Kubvumbi anotamba Dafne, protagonist yenyaya dzakateedzana. Mukadzi ane basa remarara, uyo achangobva kuraswa nemukomana wake uye anozozvikoshesa anozoona kuti anodanana zvakanyanya neshamwari yake yepamwoyo, an Astimian isingafarirwe inoridzwa naJuan Blanco.
«HBO Europe neMandarina vakatenda nyaya kubva paminiti yekutanga uye pachinzvimbo chekucheka mapapiro angu vakandipa rusununguko rwakakwana kuti nditaure pasina hunyanzvi kana hunyanzvi hwekugadzira, kusimudzira izwi rangu uye kunyora kwangu uye kuti, kana iwe uchinyora chimwe chinhu chaicho, chinhu chepamusoro uye mufaro. Yakave yakanaka uye cathartic maitiro uye kunyangwe iri dizizi, ini ndinonzwa ndakachengetedzwa nevashoma veanoshamisa mahunyanzvi, vanovawo shamwari dzangu. Ini handikwanise kukumbira zvimwe », anotsanangura muimbi.
Aya ndiwo ekutanga ayo HBO yakasimbisa kusvika parizvino kwehafu yepiri yegore. Akasiyana kwazvo akateedzana kubva kune mumwe nemumwe, anozotarisana nemvumo yeruzhinji munguva pfupi iri kutevera. Iwe unoda here kuona chero eaya akateedzana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Nyaya dzaunogona kuona paHBO gore risati rapera